Kooxda Banaadir oo qaadday koobkii gobollada - BBC Somali
Kooxda Banaadir oo qaadday koobkii gobollada
Image caption Kooxda Banaadir
Kooxda kubbadda cagta ee gobolka Banaadir ayaa ku guuleeysatay tartankii 18aad ee cayaaraha kubadda cagta ee gobolada Soomaaliya ee lagu qabtay magaalada Garoowe.
Cayaartii kama dambeysta ahayd ee tartanka ee galabta oo dhexmartay kooxaha gobollada Banaadir iyo Bari ayaa waxa 1-0 ku bediyay kooxda gobolka Banaadir.
Image caption Kooxda kubadda cagta ee gobolka Bari
Cayaarta oo aad u xiiso badneyd ayaa waxa ka qeybgalay masuuliyiinta Puntland, oo uu ugu horeeyay Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed oo guddoonsiiyay kooxda Banaadir koobka iyo lacag gaareysa lixdan milyan oo shilin.
Munaasabaddaasi ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay madax ka socotay gobolka Banaadir oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka Banaadir, Maxamuud Nuur Tarsan iyo masuuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Cayaaraha gobolada oo markii ugu horeysay ay marti gelisay Puntland ayaa waxa ka qeybgalay 15 gobol waxaana ay socdeen muddo 16 maalmood ah.